पिसिआर पोजिटिभ आए के गर्ने? – Health Post Nepal
पिसिआर पोजिटिभ आए के गर्ने?
२०७८ वैशाख १६ गते १२:४७
यसपटकको नयाँ प्रजातिको महामारी गत सालको जस्तो सामान्य छैन्र ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, शरीर दुख्ने, स्वाद र गन्ध हराउने, पखाला वा/र बान्ता हुने, एकदम थकान हुने, निद्रा लागिरहने, छालामा बिमिरा आउने, आँखा रातो हुनेमध्ये केही लक्षण मिलेमा तुरुन्त पिसिआर टेस्ट गर्नुहोला।
–पिसिआर पोजिटिभ आएमा गतसाल जस्तो सप्लिमेन्ट ( भिटामिन वा इम्युन बुस्टर ) खाएर ढुक्क नहुनुहोला। यसपटक छिटो कोभिड निमोनिया हुने भएकाले तुरुन्तै नजिकको कोभिड अस्पतालको फिभर क्लिनिकमा जानुहोला। त्यहाँ चिकित्सकले तपाईंलाई परीक्षण गरेर आवश्यकता अनुसार छातीको एक्स रे, रगतको जाँच तथा सिटि स्क्यान गर्ने सल्लाह दिनुहुन्छ। यदि तपाईंको अवस्था खराब छ भने उहाँहरुले औषधि वा भर्नाका लागि सल्लाह दिनुहुनेछ , उहाँहरुको सल्लाह अक्षरसः पालना गर्नुहोला ।